Ogologo oge ole ka Lyme nwụrụ? - Okirikiri
Isi > Okirikiri > Lyme na-anwụ okirikiri - olee otu ị ga-esi dozie
Lyme na-anwụ okirikiri - olee otu ị ga-esi dozie
Ogologo oge ole ka Lyme nwụrụ?
Ihe nhicha ma obu nhichapu uzo a ka amara dika detox naLymendị ọrịa. Mbido maka aLymeherx n'ozuzu 48-72 awa mgbe ọ malitere ọgwụ nje na ikeikpeazụruo izu, n’adịghị ka ọrịa syphilis, nke na-amalite n’ime awa ole na ole, ọ na-abụkarịkwa n’ime ụbọchị.31. 2017.
Been chọpụtala na ị nwere ọrịa Lyme ka ị na-eche maka Lymedisease? Inwere ya, oge ole ka ọ ga-ewe? Mgbe ahụ, nke a bụ isiokwu maka gị. Ekele m unu. Nke a bụ Dr.
Jason West ma nabata usoro Lyme. Ezubere usoro isiokwu a iji wetara gị ozi gbasara otu n'ime ọrịa a na-enyo enyo, nke a na-emegbu, na nke a ghọtahiere na nke ahụ bụ Lyme-Sease. Anyị ga-ekwu maka ọrịa Lyme, ogologo oge ole ka ọ ga-adịru? Ihe m na-ekwu site na nke ahụ nwere ọtụtụ ngosi dị iche iche, enwere mgbagwoju anya banyere ule ahụ, enwere mgbagwoju anya banyere ọgwụgwọ ahụ, enwere mgbagwoju anya banyere ebe ha si bịa, usoro a ka emebere iji nye gị echiche m banyere ịghọta nke a ọrịa, ebe o si abịa, otu esi enweta ya, ihe ị ga-eme maka ya ma ka anyị kwuo maka otu ajụjụ a na-ajụkarị m: ogologo oge ole ka ọ na-adịru? Azịza ya bụ, ọ dabere.
Ya mere, ka doo anya ihe m na-ekwu site na. Ọrịa Lyme nwere ike ime na nnukwu ọnọdụ; ọ nwere ike ime na ọnọdụ ndị na-adịghị ala ala. Ọ sitere na ọgwụgwọ ahụike ọdịnala nke ọrịa Lyme na ọ bụ vector borreliosis, nke pụtara na ị nwere ike inweta ya site na akọrọ.
Ọtụtụ mmadụ na-enwete oria nke oke ehi, mgbe ahụ ha na-enweta ihe mgbaàmà yiri ọkụ, nkwonkwo ha nwere ike na-afụ ụfụ. Usoro ọgwụgwọ a na-ahụ maka nke a bụ usoro ọgwụ nje, nke na-abụkarị doxycycline ma ọ bụ rocephin, ụfọdụ ndị mmadụ nwere mgbaàmà na-aga n'ihu na mgbe ụfọdụ a na-achọpụta nke a dịka PT LDS nke pụtara ọrịa ọrịa Lyme mgbe a gwọchara ya. Ahụrụ m ọrịa Lyme nke nwere ọtụtụ nsogbu fọdụrụnụ na-adịghị ala ala nke achọpụtara dị ka nsogbu autoimmune n'ihi na echere m na ọdụm ọdụm na-awakpo akwara gị ma mee ka akwara wee daa ma ị nwere ike nweta mgbaàmà ihuenyo MSP na-adịghị na ọrịa na-enweghị atụ, ị nwere ike nweta ọrịa Parkinson, ụbụrụ foogu, m chee na ihe ndia nile bu ezi uche.
Onwere onye na-arịa ọrịa Parkinson nwere ọrịa Lyme? Ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara ya? Echere m na ọrịa na-adịghị ala ala na-ebute ọtụtụ nsogbu ahụike ogologo oge. Ugbu a mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-eji ọgwụ nje agwọ ya, mgbe ụfọdụ ha na-eji ihe na-akpali akpali emeso ya. Somefọdụ ndị na-agbanye ya ma biri na ike ma ọ bụ mkpokọta ahịhịa na vitamin na mineral na homeopathics na nke a bụ ihe m na-agwa ndị mmadụ ma a bịa n'ịgwọ ọrịa.
Mgbe ị ga - akawanye mma, ị ga - aga n’ihu, ma ọ bụrụ na ị bụ ugwu ugwu ma ọ bụ na ị na - aga n’okporo ụzọ nke ọzọ ihe ị ga - eme bụ ịkwesịrị ịdị na - ele anya na ntanetị bụ ngwa ọrụ magburu onwe ya na ihe ọjọọ n’ihi ya na - enye gị nnukwu ozi , o nwekwara ike inye gị nsị ma ọ bụ ihe ọmụma na-ezighị ezi, yabụ kwuo banyere ọrịa Lyme na ogologo oge ọ ga-adị na ya dabere na mgbaàmà na ngosipụta ngosipụta na enwere ike itinye aka na mmebi yana ihe m na-ekwu na nke ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ dị akwara ma ọ bụ nkwonkwo ma ọ bụ irighiri akwara, gịnị? eme m na-eche na ọ dị ka obere ite mmiri nke ọrịa na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-abata iji kpochapụ ite ma ọ bụ ọrịa na-efe na ihe na-eme bụ usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike nke ukwuu ọ na-emepụta mbufụt na m n'ụzọ ahụ ma ọ bụ usoro nke nwere ike mee ka nkwonkwo ma ọ bụ akwara kpasuo iwe na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike iji kpochapụ ya, yabụ, ihe na - eme bụ nsogbu a na - adịgide oge na - egbochi mgbochi mkpali ebe ị na - achịkwa ya. n'elu-na-na-counter nonsteroidal mgbochi mkpali ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ cortisone ma ọ bụ prednisone ma ọ bụ immunomodulatory ọgwụ, Echere m na ogologo oge ọgwụgwọ bụ emerụ n'ihi na ọ na-emetụta ahụ anabata na mgbe ahụ na ọ na-eme na i nwere ogologo okwu ma ọ bụ a ruo ogologo oge nke ahụ ike otú ị chọrọ iji kpalie gị usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ iji jide n'aka na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ siri ike ka ha nwee ike imeri ọrịa Lyme. Ugbu a, ọ na-amasị m ịgwa ndị mmadụ ihe atụ a.
Ọ na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị 90 rue 120 ka ọbara wee si n'ọkpụkpụ pụta, banye n'ime mgbasa ahụ, ọ ga-anwụ otu obere, ụdị a na-aga site na splin ma na-emegharị ya ma na-amalitezi ihe niile, yabụ okirikiri ndụ ọbara ọbara ọbara bụ 90 ruo ụbọchị 120. Ekwenyere m na e nwere usoro ole na ole na ọrịa Lyme, enwere akụkụ spirochete, usoro spore, usoro intercellular, usoro ịmalite, na usoro biofilm. Anabataghị nke a na usoro ọgwụgwọ ọdịnala ma ana m enweta ozi a site n'ọtụtụ akwụkwọ na ọmụmụ dị iche iche.
Echere m na e nwere ọtụtụ ihe na Lyme na ihe kpatara nke ahụ ji dị mkpa, yana ịghọta etu Lyme si adịru bụ n'ihi na ọ na-ewekarị ọtụtụ ntụgharị ọbara ma ọ bụ usoro ọgbụgba ọbara iji mee ka mmadụ nwee ike imeziwanye. Ọ pụtaghị na ị gaghị enwe ike ịka mma na mbido ọgwụgwọ, ọ bụ ezie na n’ọtụtụ ọgwụgwọ ndị mmadụ na-echekarị na ọ ga-ajọ njọ tupu ha adịkwuo mma, ma ọ bụrụ na ahụike gị zuru oke ma nwee Lyme ebe a, ọ bụghị ụdị a ogologo shot ka mma. Ihe merenụ, ị na-arịgo na ala na ị nwere kọmị na-agagharị agagharị na ọ dabere na nrụgide gị, nri nri gị, n'uche gị, ahụ gị, mmekọrịta gị.
Enwere ọtụtụ ihe enwere ike ijikọ yana nchekasị anaghị ebute ọrịa Lyme, mana nrụgide dị ka ịtụba mmanụ ọkụ na ọkụ na ịnwe ọkụ ndị ahụ wee nwụọ ma ị nwere mkparịta ụka ndị ahụ na oge maka ha Lyme ọrịa, ọ na-ewekarị okirikiri ọbara abụọ ruo ise ma ọ bụ isii, ma ọ bụrụ na otu okirikiri emee kwa ụbọchị 90 ọ nwere ike ịbụ ọnwa isii ruo 15 ma ọ bụ 18, ọ dịkwa nwute na m na-agwa ndị nwere ọrịa Lyme akụkọ a. N'ụzọ ụfọdụ, ọ dị ka mmeri lọtrị. Ihe ndị a niile na-agakọ, ikekwe ị nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa na-adịghị ike, ikekwe ị nwere ọtụtụ nrụgide, ma eleghị anya ị nweela trauma ma ọ bụ mee ka usoro mgbochi gị ghara isi ike ma ọrịa ahụ abanye n'ime egwuregwu na ihe na-eme bụ na ị ga-amụ anya karịa ndị nkịtị na mgbe ọ na-eme Mgbe a bịara n'ọrịa Lyme ma ọ bụ ọrịa autoimmune ma ọ bụ kansa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ọtụtụ mmadụ na-asị, 'Gịnị kpatara m?' azịza ya bụ, Amaghị m ihe kpatara na ọ bụ gị, mana m na-agwa gị nke a: ọ bụrụ na ịchọrọ ka nrụgide karịa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịa ọrịa ogologo oge, malite iji onwe gị na ndị ọzọ.
Amaara m na nke a abụghị ụzọ kachasị mma iji mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ ma ọ bụ nwee ahụike, mana atụnyere ahụike gị na ndị ọzọ. Enwetara m ihe a mere n'ọfịs ebe mmadụ batara na ha kwuru na ị maara ihe, ọ bụ ihe na-ezighi ezi, di m nwere ike ịpụ ma drinkụọ mmanya, ị maara, tọn Mountain Dew na ọ nwere ike iri pizza, ọ dịghị ihe na-enye afọ ya nsogbu, ị maara gị? , ọ bụ ihe atụ mmadụ zuru oke ma ọ naghị echebara onwe ya echiche ma m kwesịrị ịkpachara anya, m ga-abụ ndị na-eri nri, m ga-ehi ụra n'efu, m ga-abụ soy n'efu, ihe niile ga-abụ organic , ọ ga-adị ọhụrụ ya, ọ na-ewe nnukwu ume ma ọ na-ewe nnukwu mbọ iji rụọ ọrụ n'ụzọ nkịtị, ị maara pasent 50 ma ọ bụ 60 nke ihe di m na-eme ma ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ ma ana m agwa ha na ị maara ihe m ma amaghi m otu esi aza ya iji mee ka obi di gi nma karia ikwu ihe a ..
N'iji ihe omumu nke onye ozo tụnyere ihe omuma gi na eme ka obi adighi gi nma ma oburu na inwetaghi ihe ozo site na nke a Video na-aputa ihe m na agba gi ume ka o mee ka odi mfe ighota na mmadu nile nwere uzo nke ha, onye obula nwere nsogbu ha na nsogbu ha ma ọ bụrụ na ị hụ onye na-enweghị nsogbu ọ pụtara na ị maghị ya nke ọma na ọ dị nwute na nsogbu gị na ndụ ma ọ bụ ule gị nke Chineke ma ọ bụ Onye Kachasị Elu gị na-enye gị bụ na ọ gbasara gị ahụike, ụzọ kachasị mma isi mesoo ya bụ naanị ịsị na ọ bụ otu a ka m si arụ ọrụ Ma atụnyere m onwe m na onye ọ bụla ọzọ Ugbu a, enwere m obere okwu gbasara ogologo oge ọrịa Lyme na-adịgide, azịza ya bụ, ihe niile dabere na njirimara mmadụ, biochemistry nke onye ọ bụla na-azaghachi ọrịa ahụ, mana ọ bụrụ na ịnwere ma ọ bụ na-enyo enyo na ị nwere nkwenye gbasara ọrịa Lyme ọrịa Lyme, ọgụ a na-adịkarị n'etiti ọnwa 3 na 18 maka ọtụtụ mmadụ ma ọ dị mwute maka ndị ọzọ ọ bụ ndụ niile comm Mburu. Ọ dị m ka ya bụrụ na e nwere azịza ka mma na nke ahụ, mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa otu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi na-agwọ ọrịa Lyme bụ ịhazigharị ihe niile ma debe ihe niile n’ebe kwesịrị ekwesị ka ị nwere ike. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnagide nrụgide, mgbe ahụ ị nweghị ike ime ka ọ pụọ, enweghị ọgwụ anwansi ma ọ bụ ude mmiri ma ọ bụ ọgwụ nke ga-eme ka nchekasị pụọ, mana ọ bụrụ na ị nwere ike belata ma chịkwaa nchekasị gị, nwee mmekọrịta ahụike wee mezie ihe ọ bụla bụrụ nke gị Inye homonụ, biochemistry gị, usoro biomechanical gị, ị nwere ohere dị mma iji meziwanye ahụike gị.
O di nwute na nke a apụtaghị na ọgwụgwọ 100%, mgbe ụfọdụ ọrịa a na-emebi akụkụ ahụ, anụ ahụ na irighiri akwara na ogologo oge, mana ekwenyere m na enwere olileanya mgbe niile. Anaghị m ekwu na e nwere ọtụtụ narị ederede akaebe na blog anyị kwa ụbọchị vitamin H na enwere ezigbo akwụkwọ mara mma na-apụta akpọrọ m Abụ m dike nke akụkọ nke m banyere ndị meriri ọrịa ha ma egeghị ya ntị ma kwuo ndị ọzọ nọ na nzuzo ma ọ bụ na-enwe nzube ma ọ bụ na mberede na ndụ gị na-agwa gị otu esi emeso ndụ gị na otu esi alụ ọgụ maka ọrịa gị. Nke a bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke nwere ike ịmepụta owu ọmụma nke m kwenyere na olileanya dị mgbe niile, yabụ lee gị n'isiokwu na-esonụ n'usoro isiokwu na Lyme Disease.
Nke a bụ Dr. Jason West.
Kedu ihe Lyme HERX na-eche?
Herxmmeghachi omume nwere ikena-eche dị kaflu. Dị ka ọ na-adị, ahụ ike na nkwonkwo na-arịwanye elu, isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ike ọgwụgwụ, ahụ ọkụ dị ala na ụfụ ụbụrụ na-adịkarị. Oge ụfọdụ ịgbaso usoro nkwekọrịta detox ma belata usoro ọgwụgwọ ga - enyere aka ịkwụsị yamgbaàmà.18. 2019.
'Abụ m onye ahụ gbasiri ike. Mgbe niile na mgbatị ahụ. Anọ m mgbe m nwere ike.
Ma mgbe ihe na-abịa, m na-achọ ịhụ dọkịta n'ihi na achọrọ m ijide n'aka na m nwere ahụike. Nke a bụ ọla edo nke ndụ dị mma karịa akụ na ụba ọ bụla i nwere ike inwe bụ ahụike gị. 'Enwere m ọtụtụ ndị dọkịta na ahụike m.' Ọ dị m ka isi ọwụwa, oké mpụga, mgbaàmà ogbu na nkwonkwo.
Enwere m nsogbu ọwara carpal nke na-emeghị nke ọma. N’ihi ya, ọ gwara m ka m gakwuru dọkịta na-agwọ ọrịa Lyme. '“O chere na ọ bụ ọrịa Lyme.
Anọ m na-agwọ ya yana ọ na-akwado ịmịnye m mmiri ogwu n'ahụ m maka ọgwụ nje na nke ahụ bụ mgbe m bidoro kpuo ìsì n'aka nri m. Echere m echiche, 'Ọfọn, ikekwe nke ahụ? Ọ bụghị ọrịa Lyme, ikekwe nke ahụ bụ ihe ọzọ. '' 'Bịanụ, lee ihe m chere na ọ bụ ọrịa Lyme, ọ bụghị.' 'Agakwuuru m ọkà mmụta sayensị ma hụ dọkịta na-awa anya wee gaa maka MRI na ya hụrụ na m nwere akpụ golf na gland nke na-akụda ụbụrụ ụbụrụ ma kechie onwe ya gburugburu akwara optic. '“Kinddị ihe a wutere m n'ihi na ị nwere ike iche na ọtụtụ ndị nọ n'ọkwá ndị a ga-aghọtala ya ma ọ bụ tụọ ya n'oge.
Ma kama ha chere na ọ bụ n'isi m ka otu golf golf ma ọ bụ etuto dị na pituitary gland. Removed wepụla ihe dị ka 90% nke etuto ahụ, yana ọgwụ ndị m nọ ugbu a na-enyere aka igbochi ogo hormone na-eto eto. Ọ bụrụ na a chọpụtala m na mbụ, agara m na-a medicationụ ọgwụ ma na-agbada ihe niile na-enweghị ịwa ahụ. '' Achọghị m ka onye ọzọ gabiga otu ihe ahụ m.
M pụtara, m ka nọ ebe a. Ma enwere ụbọchị mgbe m nwere ike ịme ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na ụbọchị mgbe m na-enweghị ike ịpụ apụ na akwa ma ọ bụrụ na achọpụta m na mbụ m agaghị agabiga ihe m na-agabiga ugbu a. Enwere m ụmụ atọ na ezigbo nwunye na enwere m obi ụtọ ịnọ ebe a. 'Ọ bụ oge nrụgide siri ike maka afọ 2-3 na ụmụ m na ezinụlọ m mana enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla, mana ha nwere ike ịhụ ya wee nwee mmetụta.
N’ịlaghachi azụ, enwere m ihu ọma na ọ nọ gburugburu ma ezinụlọ m ka na-arịa ọrịa Lyme. Ọ bụ naanị ọgwụ mgbochi na-enye mgbe niile ma ọ bụ naanị ngwa ngwa. Ọ chọkwara nyocha ọzọ ka ndị ọzọ nwere ọrịa ebe ọgwụ nje na-emetụta ha ọbụna njọ. 'Ọ bụrụ na ọgwụgwọ ahụ arụghị ọrụ, ọ ga-enwerịrị ihe ọzọ ga-akpata ya.' >> Ọ bụrụ na a gwọọ gị maka ọrịa Lyme na-adịghị ala ala ma ị ka na-adịkwa mma, biko mee ike gị niile maka ahụike gị ma nwee echiche nke abụọ. >> Ọ bụrụ na ịchọrọ na ịnwere ọrịa Lyme na-agwọghị ọrịa ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ afọ, biko kpọtụrụ Onye Ọrịa Ọrịa Na-efe Ọrịa nke ga-ekpochapụ FDA, nyocha zuru oke.
Ogologo oge ole ka mmeghachi omume nke herxheimer ga-adịru Lyme?
Nsogbu a na - amalite rue ụbọchị iri, ọ na - abụkarị n’ime awa iri abụọ na anọ mgbe ọgwụ nje gwọchara yaLymeọrịa, ma gosipụta ya site na ahụ ọkụ, akpata oyi, oké ihe mgbu na ọkụ anụ.Mgbaàmàdozie ka awa ole na ole gachara.
You nwere ike HERX ruo ọnwa?
Maka m,Herxheimermmeghachi omume na-adịru otu izu ma ọ bụ abụọ, wee gafere. Mgbe ụfọdụ ha na-adị nanị ụbọchị ole na ole. Ihe niile dabere na onye ọrịa. Amaara m ndị ọrịa na-akpọrọ Heritage maka aọnwama ọ bụ karịa.
N’isiokwu a, aga m akọwara gị ihe mere ịgbanwe nri gị ji eme ka iwe ghara ịgwụ gị tupu ị gbakee.
Bryan Dzvonick ebe a. E nwere ọtụtụ narị ụdị nke nje, yist, ndị na-abụghị ndị mmadụ, ihe ndị dị ndụ, na nje na eriri afọ gị.
igwe kwụ otu ebe na-enyocha 2015
N’ụwa zuru oke, ụmụ irighiri eriri afọ gị niile na-ebikọ ọnụ. Ha na-enyere gị aka ịgbari nri gị, na-emere gị vitamin, ma na-akpali usoro mgbochi gị. Na bayoloji, a na-akpọ ụdị mmekọrịta a mmekọrịta mmadụ na ibe ya; ebe akuku abuo na erite uru.
Microbes na-enweta nri sitere na eriri nke ahụ gị na-apụghị ịgbari, ị na-enwetakwa nri, vitamin, na nchebe site na microorganisms. Ma, ụwa ezughị okè. Enwere ụdị mmekọrịta mmekọrịta ndị ọzọ.
Ikekwe, ihe a na-ahụkarị bụ commensalism; otu nje na-erite uru na ya ma ihe ọzọ na-adịghị emetụta ya. N’ụzọ bụ isi, enwere ọtụtụ nje na - ebi n’ime eriri afọ gị na - eri nri ị na - eri, mana ha anaghị emerụ ahụ. Are nọ naanị ebe ahụ.
Ma na enwere ụdị mmekọrịta mmekọrịta nke atọ akpọrọ parasitism. N’ọnọdụ a, ụmụ nje na-erite uru site n’izuru nri gị, na-eri ihe nchebe nke eriri afọ gị, na ọbụna na-a yourụ ọbara gị. Na ọnọdụ a, ha niile na-enweta elele ha mgbe ị na-ata ahụhụ.
Ọ dị mkpa iburu n’obi na ọtụtụ ụdị nje ndị na-ebi n’ime eriri afọ gị abụghị nje ndị ọzọ; ma ha nwere ike ịba ụba ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ha buru oke ibu ma ọ bụ ọ bụrụ na ha na-achịkwa mpaghara ebe ha na-ekwesịghị ịdị. Ka anyị chee na n'okpuru ọnọdụ nkịtị microbe X bụ ihe dị ndụ. Ọ na-eri nri ị riri mana ọnaghị emerụ gị ahụ, agbanyeghị endotoxin ọ na-ewepụta, mgbe ndị otu ya nwụrụ.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ microbe X bịara buru oke ibu, ọ gaghị abụrịrị ihe nkịtị. Kama nke ahụ, ọ na - aghọ nje parasitic n'ihi na: a) ọ na - ezu ohi nri gị karịa, b) ọ na - ebute nzaghachi na - adịghị ala ala, na c) mgbe ndị bi na ya nwụrụ, ọ na - emepụta endotoxin karịa. Ka anyị kwuo na ị banyela n’omume iri ọtụtụ carbohydrates n’ime ọnwa ole na ole gara aga.
Na-eri kuki, donuts ma jiri 64 ounce cola na-asacha ha kwa ụbọchị. Ahụ gị agaghị enwe ike ịmịnye shuga niile. Ma ihe fọdụrụ na-enye nri na microbe X, nke na-abawanye ọnụ ọgụgụ ya.
Ugbu a na ị na-eri nri ndị a niile, a ga-echekwa ọnụọgụ Microbe X. Kwa ụbọchị ka a na-amụ ndị ọzọ ma ọtụtụ na-anwụ kwa ụbọchị. N'oge ụfọdụ, ndị bi na Microbe X ga-ebu oke iji kpatara gị nsogbu.
Ọ bụ parasaiti ugbu a. Akụkụ nke ndị bi na ya na-anwụ kwa ụbọchị (kwa ụbọchị) na-ewepụta endotoxin zuru oke iji bute ihe mgbaàmà dịka isi ọwụwa. Ọ bụrụ n’ịgbanweghị ihe ị na-eri, ị ga-anọgide na-ata ahụhụ n’oge a.
Na-eri ụyọkọ shuga nke na-enye Microbe X. Ndị bi na ya na-eto eto, n’etiti nri, ụfọdụ n’ime ndị bi na ya na-anwụ, na-ewepụta endotoxin zuru oke iji nye gị isi ọwụwa na-adịghị ala ala, na-enye nsogbu. Otu ụbọchị, ị kpebiri ịgbanwe ihe ụfọdụ na nri gị.
Kpebiri ịhapụ carbohydrates. Will ga-anọ na nri nri. You na-agbadata oriri carbohydrate gị nke ọma.
Enweghị kuki ọzọ, enweghịkwa donuts, enweghịkwa cola. Microb X na-agwụ nke nri na ọnụ ọgụgụ ya na-amalite ịnwụ na ọnụọgụ ọnụọgụ, na-ahapụ ọtụtụ endotoxin n'ime sistemụ gị. Mgbe ihe dị ka otu izu nke keto dieting, ị na-amalite na-eche ma ị na-eme ihe ziri ezi n'ihi na isi ọwụwa gị akawanye njọ.
Ugbu a, ị na-agbọ agbọ, na-akụ azụ, na afọ ọsịsa. Nke a bụ mmeghachi omume ọnwụ. Fọdụ ndị mmadụ na-akpọ ya keto flu.
Ndị ọzọ na-akpọ ya mmeghachi omume Jarisch-Herxheimer; Mana na isi, endotoxins ha na-emepụta nwere ike ịbụ ihe zuru oke iji bute ihe mgbaàmà mgbe nje bacteria nwụrụ. Maka ọtụtụ mmadụ, ihe mgbaàmà na-adịru ụbọchị ole na ole ruo izu ole na ole ma nwee ike nyere aka site na ịre unyi na ị drinkingụ ọtụtụ mmiri. Onye ọ bụla nke gbalịrị ịme mgbanwe dị ukwuu na nri ma nwee ụfọdụ n'ime ihe ndị a kwesịrị ịma na oge na-aga (ihe dị ka izu abụọ) ị ga-adịkwu mma.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-enwe oke mkparị banyere nke a, ị nwere ike were nwayọ nwayọ. Adịla na nri nri, jiri nwayọọ nwayọọ malite (oge na-aga) na-agbadata carbohydrates gị na nke ahụ nwere ike inye aka belata ụfọdụ mgbaàmà ahụ. Ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, ị kwesịrị ị ịme mkpịsị aka.
Daalụ maka ikiri na ịhụ gị ọzọ!
Ọrịa Lyme ọ na-adịgide n'ahụ gị ruo mgbe ebighị ebi?
Ọ bụrụ na a gwọọ gị,Ọrịa Lyme na-emeọ bụghịikpeazụruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, maka ụfọdụ ndị,ihemgbe emecharanke ọrịa ahụnwere ike ịdịgide ruo ọtụtụ ọnwa na mgbe ụfọdụ ọbụna ọtụtụ afọ.
Ahụ gị ọ̀ pụrụ ịlụso ọrịa Lyme ọgụ?
Ọ bụrụ na enwetaghị ọgwụgwọ ya ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ karịa, ụfọdụ akụkụ nke ndị butere ya na-enwe nsogbu ọgụgụ isi, akwara ozi, na ọrịa obi. Ọ bụghị mmadụ niile na-arịa ọrịa a; n'ezie, ọ ga-ekwe omume n'ọnọdụ ụfọdụ agbanyeghị na ọ nweghị nchekwa ịdabere nausoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụkalụso ọrịa Lyme ọgụna nke ya.
Caffeine ọ na-emetụta ọrịa Lyme?
A .ụ kọfịabụghị azịza ịbawanye ụba ike naLymen'ihi na ọ naghị enye nri na-edozi ahụ maka mmepụta ume. Mgbe ị na-enwe ahụmịhe na ụra na-ero gị, njem gị nwere ike ịbụkọfịihe onunu dikakọfị, tii, chocolate ma obu kola mmanya.8. 2018
Gịnị bụ herxheimer reactions Lyme ọrịa?
Onye nyocha ihe gbasara ahụike bụ Adolf Jarisch na Karl chọtara yaHerxheimerna akwukwo ha banyere oria ozo dikaLymenke nje ya bụ spirochete, nke pụtara inwe ọdịdị dị gburugburu Jarisch-Mmeghachi omume Herxheimerbụ mmeghachi omume na-adịghị mma maka nsị nje bacteria na-egbu site na ọgwụ nje.
Kedu oge mmalite nke mmeghachi omume nke herxheimer na-amalite?
Ihemmeghachi omumena-amalite n’ime awa abụọ iji gwọọ ya, ihe kachasị elu n’ihe dịka elekere asatọ, wee pụọ n’ime awa iri abụọ na anọ ruo iri atọ na isii. Ihe kpatara Jarisch-Mmeghachi omume Herxheimeramaghị, ọ bụ ezie na ịhapụ T. pallidum membrane lipoproteins nke na-akpali proinflammatory cytokines nwere ike ịkọwa ihe omume ahụike a.
Kedu usoro nke atọ nke ọrịa Lyme?
Ọ bụ ezieỌrịa Lymekewara ekewauzo atommalite mpaghara, gbasaa ozigbo, wee gbasaa na mbubreyomgbaàmànwere ike ichikota. Fọdụ ndị ga-ewetara na a gasịrịogbonkeọrịaenweghịmgbaàmànke dị na mbụọrịa.
Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke ọrịa Lyme na-anwụ?
Na-emeso mmeghachi omume nkwụsị site na nje, Ọrịa Lyme na Yist. Ọnwụ nwere ike ibute ahụ ọkụ, akpata oyi, isi ọwụwa, ahụ mgbu, mgbakasị nke eriri afọ, afọ ntachi, afọ ọsịsa, nju anya, hives, akpịrị akpịrị, ntị ntị, mgbu ezé, ọsụsọ, iwe mmụọ, ụfụ ụbụrụ, nchegbu na ọtụtụ mgbaàmà ndị ọzọ. Enwere m ihe ndị a niile na ndị ọzọ.
Kedu mgbe Herxheimer na-anwụ mmeghachi omume na Lyme?
Banyere Mmeghachi omume Herxheimer na Lyme. Ọ na - eme dị ka nje ma ọ bụ yist anwụ n'oge ọgwụgwọ ọgwụ nje. Ọ na-adịkarị inwe mmeghachi omume nke Herxheimer mgbe ị na-amalite antimicrobial herbal ma ọ bụ ọgwụ nje mgbe ị na-agwọ Lyme. Mmeghachi omume ndị a nwekwara ike ime mgbe ewebata ọgwụ nje ọhụrụ n'ime ọgwụgwọ.
Kedu ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ si emeghachi omume na ọrịa Lyme?
Ha na-enwe mmetụta jọgburu onwe ya dịka ọnụọgụ nje Lyme e gburu. Ka nje Lyme na-egbu karịa, ka a na-ahapụ endotoxins. A na-ahapụ Endotoxins site na mgbidi mkpụrụ ndụ Lyme bacteria mgbe mbibi mgbochi cell ya ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ usoro mgbochi.